Barnaamijka ugufiican ee JPG loogu badalo ICO iyo degello isku mid ah | Abuurista khadka tooska ah
Manuel Ramirez | | Qalabka Naqshadeynta, Astaamaha
Barnaamijyadan loogu talagalay u beddelashada sawir JPG ah ICO waxay nolosheena u sahlaysaa in loo guuro qaabka sawirkaas oo aan loo aqoon kii ugu horreeyay, laakiin loo adeegsado bey'adda IT-da oo ay lagama maarmaan u tahay in la abuuro hal ama in ka badan oo sawirro ah oo cabbirro kala duwan leh iyo midab qoto dheer leh; si kale haddii loo dhigo, kuwa horumariya softiweerku waxay raadinayaan qaab muuqaal kale oo u heellan nooca wax soo saarkooda.
Waxaa ka mid ah barnaamijyada la heli karo si loogu beddelo sawirka JPEG qaabka ICO waxaan ka helnaa tiro wanaagsan oo ah barnaamijyada shabakadda inay si buuxda noogu adeegi doonaan isla ujeeddadaas. Waxa ugu fiican ayaa ah inaan badbaadin doonno rakibidda barnaamijka (in kastoo aan hayno barnaamij dhammaystiran oo lagu rakibo oo aadan seegi karin) waana inaan u marnaa oo keliya inaan helno xiriir ku habboon cinwaanka khadka tooska ah ee shabakadaha qaarkood. waxaan u soconaa inaan wax barano.
1 U beddelo Sawirkaaga qaabka ICO
4 Beddelaan Online Bilaash ah
7 Barnaamijka Windows: PNG bilaash ah oo loogu beddelo ICO
U beddelo Sawirkaaga qaabka ICO
Boggan internetka ayaa ah meesha aan awoodno hel noocyo badan oo beddelaad ah dhammaan noocyada qaabab la xiriira sawirrada. Xaqiiqdii, magaceedu waa mid qaas ah oo aan la yaabaynin inaan u rogi karno qaababkaas sida PNG, JPG iyo ICO, taas oo ah waxa aan raadineyno.
Si ka duwan noocyada kale ee aan kuu soo bandhigi doonno, kani waa bilaash, sidaa darteed uma baahnid inaad dhex marto sanduuqa si aad awood ugu yeelatid u beddelidda sawir qaab JPEG ah ICO. Mid ka mid ah waxyaabaha muhiimka ah ee degelkan ayaa ah interface waa iska fudud, kaas oo ka caawiya hawsha beddelka si aynaan isugu wareerin.
Midka kaliya ee haa, waa inaad isdiiwaangalisaa inaad awood u yeelatid inaad kahelaysid wanaaggeeda iyo faa iidooyinkeeda, in kabadan inta kugu filan si aad xogteena uga dhigato cudurdaar. Lafteeda lafteeda waa degel wanagsan oo loo badalo sawirada yar yar baahiyo badan. Dabcan, waxay leedahay xayeysiinta caadiga ah, markaa si fiican diiradda u saar tallaalka oo aad daaqaddaas oo aan ku tuuri karno faylasha ama si fudud ugu dhajin karno badhanka si aan u rarno sawirka aan dooneyno inaan ka beddelno JPEG una beddelo ICO.
Beddel sawirkaaga - -KA
Website-ka waxaan dhihi karnaa waa kan bedelka muuqaalka muuqaalka ugu fiican JPG qaabka ICO ee liiska. Naafada kaliya, iyo xitaa intaa ka sii badan markaan raadineyno inaanan bixinno hal dinaar oo euro ah, waa inay ka hooseyso rukhsad bille ah si ay u awoodaan inay helaan wanaagooda iyo faa'iidooyinkooda.
Dabcan, waxaad ku raaxeysan doontaa astaamo taxane ah oo aan la iska indhatiri karin, iyo in kuwa raadinaya nooc noocan oo kale ah oo xal ah oo ay u baahan yihiin maalin kasta ay u mahadcelinayaan, sida tiro wanaagsan oo qalab ah oo wax lagu saxo, lagu cadaadiyo, lagu furo, midowdo oo xitaa qaabeeya dukumiintiyada PDF.
Oo halkan waxaan ku illoobi karnaa xaddidaadaha ay kuwa kale yeelan karaan, tan iyo ma lihin xaddiga cabbirka faylka geliyaan oo waxaan sameyn karnaa dhammaan beddelaadaha aan rabno dhibaato la'aan. Guud ahaan, waxay bixisaa in ka badan 50 qalab oo kala duwan, taageerada dhammaan qaababka muuqaalka, nooca desktop-ka ee la heli karo, iyo sir-gelinta hoosta SLL ee amniga ugu sarreeya.
Una xalka bixinta haddii aan barbar dhigno tartankiisa Maaddaama ay yihiin barnaamijyo loogu beddelayo sawirrada JPG ICO, waa wax aad uga jaban, markaa ha dareemin in lagaa celinayo qiimaheeda haddii aan isbarbardhigno xulashooyinka xorta ah. Halkan waxaan xor u noqon doonnaa inaan ku isticmaalno xirmada qalabkaaga sida ugu habboon. Waxay ku kacaysaa $ 6 bishii, markaa u tag.
Xalka shabakadani wuu ka duwan yahay maxaa yeelay ma codsanayso in nala diiwaangeliyo si ay u awoodaan inay adeegsadaan howlahooda ah u badalida sawirada JPEG qaab ICO ah. Markaa farqiga u dhexeeya mid ka mid ah xulashooyinka hore ee aan u haysanno nooca beddelaadda. Si kale haddii loo dhigo, waxaan illoobi karnaa inaan diiwaangelino si loogu beddelo sawirrada.
Waxaa ka mid ah wanaaggeeda sidoo kale waxaa jirta suurtagalnimada in lagu beddelo internetka dhammaan noocyada qaababka muuqaalka marka laga reebo ICO oo ah ujeeddada lagu bixiyay boostadan. Kama baxsato khibrad badan oo ay siiyeen inta kale ee websaydhka ku yaal liiska aan bixinno, maaddaama ay ka faa'iideysanayaan qaybta si aad ugu beddeli karto PNG qaabka JPG ama taa beddelkeeda.
Oo intay bilaash tahay, ma oggolaanayso in gundhig lagu sawiro JPG ilaa ICO, markaa xaaladdan waxaan ku aragnaa curyaan yar inkasta oo la fahmi karo iyadoo aanan la bixin boqolkiiba hal euro xalkeeda. Waxaan u isticmaali karnaa shabakadda inaan ku qabanno ficil u beddelashada feyl sida ay u leedahay nooc si ay ugu sii socon karto beddelidda dufcadda sawirrada JPG ee ICO.
Una xalka xiisaha leh ee aan na waydiisanayn emaylka si aad u beddesho sawirka, markaa waa inaad xisaabta ku darsataa ka hor intaadan u bixin bixinta mid kale oo ku dhowaad ku dayanaya fursadaha uu leeyahay Waxaan sidoo kale muujineynaa isku xirnaantiisa fudud ee aasaasiga ah ee aan qarin doonin waayo-aragnimada haba yaraatee laakiin waxay fududeyneysaa fulinta baahiyaheena.
Beddelaan Online Bilaash ah
Websaydh kale oo internetka ah oo horseedi kara jahwareer by ta ah "bilaash" in lagu xidhiidhiyo haysashada sumcad badan, maaddaama runtii aan wajaheyno xallinta qiimaha sare ee ka-bixitaankii hore. Waa run inaan wajaheyno mid ka mid ah beddelka lacag bixinta ugu fiican ee aan ku helno khadka tooska ah, in kasta oo qorshayaasha ay bixiyaan ay ku xiran yihiin xaddidan soo dejinta iyo qaababka la heli karo si ay u awoodaan inay fuliyaan beddelaadda la doonayo
Maskaxda ku hay in ay raacayso waxa loo qoondeeyay inta hartay, taasna waa in aan awoodi doonno inaan fulino noocyo kale oo beddelaad ah oo la xiriira fiidiyow, dukumiinti iyo qaabab muuqaal ah. Taasi waa, marka laga reebo inaan awoodno inaan adeegsanno JPG ama ICO, waxaan awoodi doonnaa inaan ku beddelno PNG, iyo in ka badan.
Malaha taas noqo mindi ciidan kale oo iswiidhish ah oo laga badalo internetka waxay ka dhigeysaa mid kale in lagu xisaabtamo si loo beddelo kuwaas. Uguyaraan markaan bixinayno waxaan iska hilmaamaynaa xayeysiinta si aan uhesho aalad dhan oo heegan ah oo loogu badalayo sawirada JPG ICOs. Waxa kale oo ku jira badalashada Dufcaddii haddii aan raadino xulashadan. Qiimuhu wuxuu u dhexeeyaa $ 6 ilaa $ 11 bishii iyadoo kuxiran qorshaha aan iibsanayno.
Beddelaan Online Bilaash ah - Web
Waxaan si la mid ah uga sii wadnaa degel noo oggolaanaya inaan marin u helno noocyo badan oo qaabab ah (iyo hore ayaan uga hadalnay isaga dhawr sano ka hor) ee feylasha muuqaalka iyo kuwa aan ahayn sida fiidiyowyada. Iyo in kastoo qaar ka mid ah qalabkeeda ay lacag la'aan yihiin, si hufan midka u beddelaya sawirrada JPG ICOs maaha.
Waxaan haynaa ikhtiyaarrada mobilada iyo miisaska la heli karo, ayaa si joogto ah loo cusbooneysiiyaa waxayna bixisaa sir si loogu soo dejiyo si aan u ilaalino taxaddar iyo badbaado. Waa ikhtiyaar qiimo leh in la tixgeliyo maxaa yeelay waxay leedahay xiriir si fiican loo farsameeyay oo waxay u noqon kartaa beddel kuwa kale.
Iyo halkii aad ka bixin lahayd bil kasta, halkan hal mar ayaan bixinaa 7 doolar si aad ugu raaxeysato khadkaaga JPG-ga ah ee ICO qaab-beddel muuqaal ah.
Oo kaliya Waxaan ku dhammeyneynaa taxanahan shabakadda internetka si loogu beddelo kuwa ugu awoodda badan, ama midka bixiya noocyada ugu badan ee noocyada beddelaadda, maaddaama ay nagu qaadaneyso 1.200 nooc iyo in aan ku heli karno hoos-u-qoris ka socota saddex qorshe: Aasaasi, Pro iyo Ganacsi.
Si kale haddii loo dhigo, waxaan ka hadleynaa beddelka ugu weyn ee khadka tooska ah ee shabakadda oo aan u tagi karno haddii maalinteenna maalinba maalinta ka dambeysa aan wax ka qabanno qaabab muuqaal oo kala duwan. Waana in Zamzar xambaarsan tahay firfircoon tan iyo 2006, taas oo ah, in ka badan 13 sano oo khadka tooska ah lagu bixiyo dhammaan noocyada qaab beddelada, oo ay ku jiraan CAD. Dabcan, waxay bixisaa u beddelashada sawirrada JPG illaa ICO dib u dhac la'aan.
Waxaa ka mid ah wanaaggeeda waxaan ku xisaabtami karnaa xadka soo rar ilaa 2GB, Taageerada in ka badan 1.100 qaabab, in ka badan 1.200 nooc oo beddelaad ah, oo laga heli karo dhammaan noocyada daalacayaasha iyo aaladaha, waxayna noo oggolaaneysaa inaan si aan xad lahayn u beddelno maalin kasta.
Dabcan, waxay leedahay qasaarooyinkeeda, tan iyo sawirada waa in midba mid lagala soo baxaa iyo soosaarista sawirkeeda dufcaddu aad bay u yar tahay hawl kasta. $ 9 waxaan haynaa qorshahaaga aasaasiga ah, $ 16 qorshahaaga Pro iyo Ganacsi si aad uhesho ilaa 35 bishiiba.
Barnaamijka Windows: PNG bilaash ah oo loogu beddelo ICO
Iyo inkasta oo aanan haysan qaabka JPG ee magaca barnaamijkan loogu talagalay Windows, Waxay bixisaa suurtagalnimada adeegsiga si loogu gudbiyo ICO. Waa barnaamij loogu talagalay Windows-ka oo waxoogaa duug ah oo is-dhexgalka ah, laakiin waxay naga caawinaysaa hawsha la rabo.
Mid ka mid ah astaamaheeda ugu wanaagsan ayaa ah awoodda tilmaamidda nidaamkee ayaan u rabnaa astaanta ICO, midkood Android, iOS, Windows, Linux ama Mac OS X. Waxay kaloo bixisaa suurtagalnimada kudar sawirro badan sidookale isticmaal badel dufcad ah.
Guud ahaan marka laga hadlayo waa a beddelaha weyn ee sawirrada PNG illaa ICO, iyo had iyo jeer iyadoo la adeegsanayo JPG, GIF, BMP iyo kuwa kale. Waxa kaliya ee seegi kara ayaa ah inaad adigu astaysto xalka astaanta.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Websaydhyada ugu fiican (ama barnaamijyada) si loogu beddelo sawirka JPG ICO